ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (မြို့ ဦးကင်း) တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ပန္နက်တော်တင် တွင်းတော်ဝန်း မင်္ဂလာအခမ - Yangon Media Group
ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (မြို့ ဦးကင်း) တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း ပန္နက်တော်တင် တွင်းတော်ဝန်း မင်္ဂလာအခမ
ပဲခူး၊ မတ် ၂
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (မြို့ဦး ကင်း) တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း ပန္နက်တော်တင် တွင်းတော်ဝန်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို မတ် ၂ ရက်နံနက် ၈ နာရီကပဲခူးမြို့ဥ ဿာမြို့သစ်၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း ဘက်ကမ်း ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (မြို့ဦးကင်း) တည်ဆောက်ရေးစီမံ ကိန်း ဆောင်ရွက်မည့်နေရာ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှေးဦးစွာ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်က တံတားတည်ဆောက် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းက နှုတ်ခွန်း ဆက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးဟန်ဇော်၊ ဝန်ကြီးချုပ်ဦး ဝင်းသိန်းနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင် တို့ကအမှတ်(၁)ပန္နက်တော်နေရာ မွန်တွင် စက်ခလုတ်နှိပ်၍ Stand Pipe အား Vibro Hammer ရိုက်သွင်းပေးပြီး လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှမျိုး ရွှေနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဦးညွန့်ရွှေတို့က အမှတ် (၂)ပန္နက်တိုင်အားလည်းကောင်း၊ အမှတ်(၃)ပန္နက်တိုင်ကို ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္က ဋ္ဌဦးကြည်ဇင်နှင့် စက်မှုလျှပ်စစ် နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီး ဦးသန်းဝင်းတို့ကလည်းကောင်း၊ အမှတ်(၄)ပန္နက်တိုင်ကိုတိုင်းဒေ သကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွန့်ရွှေနှင့် ဦးကျော်မင်းစံတို့က လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၅)ပန္နက် တိုင်ကို သယံဇာတသဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ စောညိုဝင်းနှင့် ပဲခူးမြို့နယ်စည် ပင်သာယာကော်မတီဝင် ဦးမြင့် ဟန်တို့ကလည်းကောင်း ပန္နက် တော်တင်ပေးကြပြီး မင်္ဂလာပိုင် တိုင်အား အမွှေးနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်းပေးကာ အမှတ်တရစု ပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (မြို့ဦး ကင်း)သည် ပဲခူးမြို့စိန်သာလျောင်း ဘုရားလမ်းနှင့် သမိန်ဗရမ်းလမ်း ဆက်သွယ်သည့် လမ်းပေါ်ရှိပဲခူး မြစ်ကိုဖြတ်၍ တံတားအရှည် ၅၁၈ ပေ၊ အကျယ် ၄ဝ ပေ၊(ယာဉ် သွားလမ်းနှင့် လူသွားလမ်းအပါ)၊ ဘိုးပိုင်အုတ်မြစ် သံကူကွန်ကရစ် တံတားအဖြစ် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဘ ဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း ၁၇ ၅၇ ဒသမ ၇၉ သန်းဖြင့်ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တံတားဦးစီး ဌာန တံတားအထူးအဖွဲ့(၉)မှတာ ဝန်ယူတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ် ပြီး အဆိုပါတံတားနှင့်တစ်ဆက်တစ် စပ်တည်း ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း ဟောင်း ပြင်စည်မီးပွိုင့်ကနေဆံ တော်တွင်းလမ်းနှင့် ဆုံတဲ့နေရာ အထိ သုံးမိုင်ခန့်နှင့် ဆံတော်တွင်း လမ်းကနေ စိန်သာလျောင်းဘုရား လမ်း၊ ပဲခူး-သနပ်ပင်လမ်းမကြီးအ ထိ နှစ်မိုင်ခြောက်ဖာလုံ ခန့်အထိ စုစုပေါင်း ငါးမိုင်ခြောက်ဖာလုံခန့် ကို ကတ္တရာကွန်ကရစ် (ဗဃ)လမ်း အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်သည့် အပြင် ပဲခူး-သနပ်ပင်လမ်းမကြီး ကတစ်ဆင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီးကလိ လမ်းဆုံနှင့် ချိတ် ဆက်မည့် ပဲခူးမြို့ အရှေ့ဘက် မြို့ ပတ်လမ်းကိုပါ ယခုနှစ်ကစပြီး အ ကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
''ဘဝမှာ အချစ်ဆုံး ယောက်ျားသုံးယောက်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း အများကြီးဖြစ်သွားရတယ် ဆိုတာ?
'အရမ်းကြီး အောင်မြင်နေတဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ နန်းရွှေရည်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တန်းသိတဲ့အထဲမှာလည
ကျောင်းကားအစီး ၂ဝဝ ကို မြန်မာနိုင်ငံ လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများ အများပိုင်ကုမ္ပဏီက ရှယ်ယာထည??
”ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ကို ပရိသတ်တွေ ကြိုက်လာကြတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ရေးတဲ့ တေးရေးတွေကို ရှာ??
လေးနှစ်အတွင်း စည်းကမ်းပျက် ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီ ၃ဝ ကျော်ကို လိုင်စင် ပိတ်ခဲ့
တားမြစ်ဆေး သုံးစွဲခြင်း ရှိ၊ မရှိ ချီရှီရှက်ဗ် စစ်ဆေးခံရ